Romania Oo Soo Ban-dhigtay Astaanta Qeybta Ay Ka Marti-gelinayaan EURO 2020
HomeWararka MaantaRomania Oo Soo Ban-dhigtay Astaanta Qeybta Ay Ka Marti-gelinayaan EURO 2020
18/10/2016 Samatar Mohamed
Waddanka Romania ayaa boos ka heleya bikaacyada waa weyn ee indhaha caalamka iyada oo ay ugu wacan tahay iyadoo ku jirta magaalooyinka loo xulay marti-gelinta Koobka Qaramada Yurub ee UEFA EURO 2020, waxayna caasimadda Bucharest ay ku soo ban-dhigtay astaanta ay ugu talagashay tartanka qeybta ay iyadu marti-gelinayso.
Magaaladda Bucharest waxay ka mid tahay 13-ka magaalo oo 4 sanno kadib lagu dhigi doono ciyaaraha EURO 2020, iyada oo uu garoonka cimlaaqa ah ee Arena Națională uu marti-gelin doono 3 kulan oo heerka Group-yada ah iyo hal kulan oo 16-ka ah.
UEFA ayaa magaalo kasta fursad u siisay inay iskeed u xulato astaan u gaar ah, kuwaas oo marka dambe lagu wado in iyaga oo isku dheggan la soo ban-dhigo iyagoo saaran buundo dheer, si loo muujiyo xidhiidhka iyo isku xidhnaanta Yurub.
Loogadan cusub ee Bucharest, ayaa waxaa ka muuqata buundada caanka ah ee Basarab Bridge, oo la dhisay intii u dhaxeysay 2006 iyo 2011, taas oo dhererkeedu yahay 1.9km isla markaana isku xidha laba degmo ka tirsan Bucharest.
“Kubaddu waxay ka dhigan tahay buundo isku xidha qaramada” ayuu yidhi Davor Šuker oo xubin ka ah Guddiga Fulinta ee UEFA oo ka hadlayey xafladdii ban-dhiga. “Romania waa dal laga jecel yahay ciyaarahan, halka Bucharest ay tahay magaalo cajiib ah oo isku xidha tagto iyo timaaddaba” ayuu raaciyay.